Muxuu yahay qodobka ay ka qeyliyeen Kooxda Farmaajo? | KEYDMEDIA ENGLISH
Muxuu yahay qodobka ay ka qeyliyeen Kooxda Farmaajo?
Xildhibaan Cabdrisaaq, wuxuu sharci darro ku tilmaamay dooda kooxda fowdada wadday, wuxuuna xusay in Guddiga Baarlamaanku u wakiishay qabashada doorashada Guddoonka Golayaasha ay wakiil ka yihiin, Diyaarinta Jadwalka, mudeynta iyo qabadhada doorashada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Inkastoo Ujeeddada Fahad iyo Farmaajo ka lahaayeen fowdada fashilantay ee fadhiga Baarlamaanka ay ahayd in la carqaladeeyo doorashooyinka Guddoonka Labada Aqal, haddana waxa ay ku ganbanayan qodob ka mid ahaa ajandihii maanta.
Xildhibaannada NISA, ka soo galay Baarlamaanka iyo kuwa fara ku tiriska ah ee Farmaajo ku daaban, waxa ay ku doodayaan in aan loo baahneyn in la dadajiyo doorashooyinka Guuddoonka, waxayna doonayeen in cod la galiyo taasoo ah mid sharciga baal marsan.
Sida uu qabo xeer hoosaadka Baarlamaanka, waa in Gole kasta muddo todobo maalin gudahood ah, ku doorto hoggaan rasmi ah, mana jirto sabab gaar ah oo looga baaqsado xeerkaas sida uu ku doodayo Guddomiyaha Guddiga Qabanqaabada Doorashada.
Guddoomiye, Cabdrisaaq Cumar Maxamed, oo warbaahinta la hadlay, wuxuu sheegay in kaliya Agenda-hu ahaa, ansaxinta wax ka badelka Habraaca u gaarka ah Doorashooyinka Guddoonka iyo Madaxweynaha iyo dhageysiga warbixin ku saabsan hawlaha qabsoomay.
“Muddeynta Guddiga ayaa u madax bannaan, Xildhibaan ka soo hor jeesan kara ma jiro, waxaa howshaas leh Guddiga, aniga ayaan Guddoomiye u ah, waa ka doodnay, waana howl Baarlamanku inoo diray, howl xildhibaan ka soo hor jeesan karo maaha”, ayuu yiri C/risaaq.
Fahad, wuxuu u sharraxan yahay xilka Guddoomiye ku xigeynka 1aad ee Aqalka hoose, kaasoo musharixiintiisu, shahaadada tartanka qaadanayaan wixii berri ka billowda, waana sababta ugu weyn ee uu doonayo in dib loo dhigo doorashooyinka Guddoonka Golayasha.
Is-diiwaangelinta musharixiinta Guddoonka Golaha Shacabka, ayaa billaabaneysa 19-ka bishan oo berri ku beegan, waxayna soconeysa ilaa 21 April, 2022, halka musharixiinta Guddoomiyaha iyo Guddoomiye ku-xigeennada ay hadal jeedintoodu dhacayso 23 - 24-ka.
Doorashada Guddoonka Golaha Aqalka Sare ayaa iyana dhici doonta 26 April, 2022, waxayna Is-diiwaangelinta musharixiinta Guddoonka Golaha Aqalka Sare billaabaneysaa 19 bishan oo berri ku aaddan, iyadoo soconeysa ilaa 21 April, 2022.